पुर्व युवराज पारसको खराब बानि,के के गर्छन पारस ? युवराज्ञी हिमानी शाहले खोलिन रहस्य - hamro Desh
पुर्ब युवराज्ञी हिमानी शाहसंगको ताजा अन्तरवार्ता, परिवार र भविष्यबारे मनका कुरा साथै हिमानी ट्रष्टको गतिबिधिमा केन्द्रित छ | हिमानी शाहको जन्म अक्टोबर १, १९७६ मा नेपालमा भएको हो । हिमानी भारतको राजस्थानको शिखर राज्यका राजपुत विक्रम सिहं र विपुला सिहंकी पुत्री हुन् । सूर्यवंशी सिखवत राजपूत उनले ग्यालेक्सी पब्लिक उच्च माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकी हुन् ।
तत्कालिन युवराज पारससंग विवाहबन्धनमा बांधिएसंगै उनी अधिराजकुमारी भइन् । दरबारहत्याकाण्डपछि ससुरा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए, पारस र हिमानी राजउत्तराधिकारी । पूर्व अधिराजकुमारी भएता पनि हिमानी सरल स्वभावकी देखिन्छिन् । देश गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएपछि उनी हिमानी ट्रष्टमार्फत समाज सेवामा सक्रिय छन् । तीन सन्तानकी आमा हिमानीको सौन्दर्यबाट प्रभावित नहुंने सायदै कोही होला ।
विरलै संचारमाध्यमसंग बोल्ने हिमानीले नेपालआजको म्यागजिन प्रकाशन होपका लागि दिएको अन्तवार्ता यहां साभार गरिएको हो । हिमानी ट्रष्ट कस्तो संस्था हो ? हिमानी ट्रस्ट नेपालका गरिब व्यक्तिलाइ सहयोग गर्न बनाइएको गैरनाफामुलक र गैरराजनीतिक संस्था हो । आफ्नै नाममा संस्था खोल्ने सोच कसरी आयो ? हामी राजपरिवारका सदस्यहरु सामाजिक कार्यहरुमा सदा आबद्ध रहदैँ आएका छौँ ।
मुमा बडामहारानी रत्नले बालमन्दिर स्थापना गरिबक्सेको हो । बडामहारानी एश्वर्याको सक्रियतामा समाज कल्याण परिषद् जन्मिएको र हुर्किएको हो । राजकुमारी हेलेन शाह रेडक्रस र कुष्ठरोग निवारण केन्द्रमा सक्रिय होइसिन्छ । त्यस्तै राजकुमारी प्रेक्षा वीर अस्पतालमा स्वयमसेविकाको रुपमा बिरामीको हेरचाह गर्न सक्रिय होइसिन्थ्यो । मलाई समाजसेवामा लाग्ने प्रेरण मेरो परिवारका सदस्यहरुबाटै मिलेको हो । पीडामा परेका जो कोहीलाई पनि सकेको सहयोग गर्न चाहन्छु ।
वास्तवमा हामीले हाम्रो कामबाट कतिजना लाभान्बित भए भनेर रेकर्ड त राख्ने गरेको छैनौं । सानाठूला परियोजनाहरु मार्फत केही जिल्लाहरुमा सहयोग गरिरहेका छौं ।
हामीले दुई ठूला परियोजनाहरु दोलखा जिल्लामा सञ्लालन गरेका थियौं । जहाँ मानिसहरुलाई आवश्यक पानी दिइयो , शौचालयहरु बनाइयो , विद्यार्थीहरुलाई पोशाक र कापीकलम बाँडियो । महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थियौं । दोलखाबासी सम्पूर्णलाई हामीले बिभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरेका थियौं । सुदूरपश्चिमका बाढी पिडीतलाई सहयोग गर्यौं । झन्डै १०,००० व्यक्तिहरुलाई यस संस्थाले सहयोग गरिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई पनि हामीले सहयोग गर्यौं ।
मानिसहरुलाई जे मनलाग्छ त्यो भन्न दिनोस् । हामी मन, वचन र कर्मले निःश्वार्थ सहयोग गरिरहेका छौं । तपाईले साधारण मानिसहरुसँग अन्तक्र्रिया गरिसकेपछि , देशको सामाजिक आर्थिक अवस्थाका बारेमा बुझ्नुभयो ।
यसलाई कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
म मेरो देशमा सबै मानिस शिक्षित होउन् भन्न चाहन्छु । शिक्षाले नै मानव जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । यहाँ धेरै देशहरु छन्, जहाँ जनसंख्या धेरै छ, देश गृहयुद्घमा फसिरहेको छ । विभिन्न बिचारधाराका व्यक्तिहरु छन् र फरक समस्याहरु छन् ।
तरपनि उनीहरु धेरै विकसित छन् । तपाईको विचारमा नेपालमा चाहिँ कम विकसित हुनुमा के लाग्छ ?
हामी भूपरिबेष्ठीत देशका नागरिक हौं । यहाँ नै छ ठूलो फाइदा र बेफाइदा । हामी कुन बास्तविक धरातलमा छौं भन्ने कुरामा भर पर्दछ । हामीले पूर्णरुपमा हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । बाली प्रशस्त रुपमा उत्पादन गर्न कृषि आधुनिकिकरणको खाँचो छ । हामीले हाम्रो जडिबुटी , बनस्पति र जीवको विशाल धन भुल्नु हुँदैन ।
नेपाल गरीव देश हो ? होइन ।
हामीले यो देशको मुहार फेर्नलाई कडा परिश्रम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत जीवनः बिहे अगाडिको जीवनका बारेमा बताइदिनोस् न । म एक्लै हुर्किए, मेरो आमा होइसिन्नथ्यो । म सँगै दुईजना दिदीबहिनीहरु छन् । हामी धेरै हेरविचार गर्ने र मायालु वातावरणमा हुर्केका थियौं ।
घोडा चढ्ने, गीतसंगीत सुन्ने र किताब पढ्ने । सबै मानिसका राम्रा र नराम्रा बानीहरु हुन्छन् । पति पारस शाहको एउटा राम्रो र एउटा नराम्रो बानी बताइ दिनुस् न ? म यो कुरामा विश्वास गर्दछुकी, मैले अरुको बारेमा राम्रो वा नराम्रो कुरा गरेर केही पाउन सक्दीन ।
उहाँहरुबाट मैले धेरै माया पाएको छु । बुहारी हैन, छोरीको व्यवहार गरिबक्सन्छ । तपाईका छोराछोरीहरु के गर्दै छन् ? उनीहरु यहिँ नेपालमा पढिरहेका छन् । तपाई आफ्नो छोराछोरीलाइ कति समय दिनुहुन्छ ? आमाको लागि छोराछोरी भनेको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । म उनीहरुले चाहेको बेला जतिबेला पनि समय दिन सक्छु ।
धैर्य भएर । तपाईको विचारमा, मानिससँग हुनैपर्नै गुणहरु के के छन् ? सबै व्यक्तिमा मानवता हुनुपर्छ । तपाईको लागि परम आनन्द के हो ? शान्तिपूर्ण वातावरण ।
के तपाई अध्यात्मवादमा रुची राख्नुहुन्छ ?
तपाई भगावानको विश्वास गर्नुहुन्छ ? मानव भएको नाताले, म भगवानमाथि विश्वास गर्छु । सबैले यस जीवनमा राम्रा काम गरेर मुक्तिको बाटो खोज्छन । मपनि त्यहीं चाहन्छु ।
नेपालमा बच्चाहरुसँग बस्न खेल्न । तपाईको जीवनको दर्शन के हो ? मेरो जीवन दर्शन साधारण छ । हरेक दिन सिक्नको लागि हो ।
क्रिश्चियन धर्म विरोधीहरु आफैँ समाप्त हुन्छन् : माधवकुमार नेपाल (भिडियो)